Amaplani Ebhayibheli – Meyi 2022
Masifunde iBhayibheli ndawonye (uNhlaba)
izinsuku ezingu 31
Ingxenye 5 yochungechunge oluna 12, loluhlelo lwenza imiphakathi ekufundweni kwe Bhayibheli kanyekanye izinsuku ezingu 365. Mema nabanye ukuba bakujoyine njalo uma uqala ingxenye njalo ngenyanga Loluchungechunge lusebenza kahle neBhayibheli elikhulumayo. Lalela imizuzu engaphansi kuka 20 ngosuku Ingxenye ngayinye inezincwadi zeThestamente elidala kanye nelisha, nezahluko zamaHubo ezindaweni ezahlukene. Ingxenye 5 iphethe incwadi yokuqala neyesibili KwabaseKorinte, uDuteronomi, kanye no Joshuwa
1, 2 no 3 KaJohane
izinsuku eziwu 4
LePlani elula izokusiza ukufunda u 1,2, 3 KaJohane futhi izoba wusizo olukhulu kumuntu ngamunye nabafunda ngabaningi.
Amandla Angavamile Okudumisa: Inkonzo Yezinsuku Ezingu-5 Evela KumaHubo
izinsuku ezingu 5
Ukukhathazeka, ukwesaba, isizungu kanye nokucindezeleka kukhuphuke kakhulu kule minyaka embalwa edlule. Abahlabeleli babengayazi le mizwa. Nokho, bafunda ukukhulula amandla angavamile okudumisa ukuze banqobe. Thola imfihlo yokuzola kulokhu kukhuleka okuvela kumaHubo.
Ukuphila Kushintshile: Injongo
Uke wazibuza ukuthi uNkulunkulu wakudala ukuthi wenzeni noma wambuza ukuthi kungani udlule ezintweni ezithile? Udalelwe ngokukhethekile indima eyakhelwe ngokwezifiso engagcwaliswa nguwe kuphela. Noma ngabe uzizwa ulahlekile, noma ungabaza ukunyakaza, lolu hlelo lwezinsuku ezingu-5 luzokusiza ukuthi uthembele kuNkulunkulu, ukuze akuholele enjongweni yakho.
Amaplani Ebhayibheli – Ephreli 2022
Masifunde iBhayibheli ndawonye (uMbasa)
izinsuku ezingu 30
Ingxenye yesi-4 kuchungechunge lwezingu-12, loluhlelo luhola imiphakathi ekufundeni iBhayibheli lonke ndawonye ezinsukwini ezingu-365. Mema abanye ukuhlanganyela nawe ngaso sonke isikhathi uqala ingxenye entsha ngenyanga ngenyanga. Loluchungechunge lusebenza kahle ngeBhayibheli eliqoshwe ngomsindo – lalela imizuzu engaphansi kongu-20 ngosuku. Ingxenye ngayinye inezahluko zeTestamente eliDala neliSha, kuthi amaHubo achaphake kuzo zonke izingxenye. Ingxenye 4 iqukethe izincwadi ezingokukaMathewu, kanye nekaJobe.
izinsuku eziwu 14
lendlela elula yokufunda ikusia ukuba ufunde ngabaPhostoli kanye nebandla lokuqala.
Iyini inhloso yami? Ngihloselwe ukwenzani ngempilo yami? Liyini icebo likaNkulunkulu ngami? Yonke lena imibuzo abaningi bethu abazibuza ngesikhathi esithile empilweni yethu. Sihlose ukuphendula eminye yale mibuzo njengoba siqaqa ukuthi kuyini ukungena enjongweni yakho. joyina abambalwa bethu babafundi baseKholeji le-C3 njengoba besikhanyisela ngalesi sihloko.
Unkulunkulu uhambe phamba kwethu futhi uyasivikela ngemuva. Izimpi zethu usezinqobile. Uvikele abaphuphuthekile. Akamangazwa zinqinamba. Lokhu kuzinikela okugxile kwezinsuku ezi-3 kuzokushiya ukhuthazekile eqinisweni lokuthi uNkulunkulu ungumnikezi wesabelo esiqondile, isilinganiso esiqondile, sempilo yakho.
Amaplani Ebhayibheli – Mashi 2022
izinsuku ezingu 3
Ungakwazi ukunqoba imizwa yokwesaba. Udkt. Tony Evans ukuholela endleleni eya enkululekweni kulolu hlelo lokufunda olunokuqonda. Zitholele impilo yenjabulo nokuthula obulokhu uyifuna njengoba usebenzisa izimiso ezibekwe kulolu hlelo.
Yenza Isikhala Salokho Okubalulekile: Imikhuba Engokomoya Engu-5 yesizini ye-Lent
Isizini ye-Lent: inkathi yezinsuku ezingu-40 zokuzindla nokuphenduka. Umcabango omuhle, kodwa empeleni kubukeka kanjani ukuzilolongela lesizini yeLent? Ezinsukwini eziyi-7 ezilandelayo, thola imikhuba yakomoya emihlanu ongaqala ukuyenza ngesikhathi Sokuzila ukuze ikusize ulungise inhliziyo yakho iSonto Lovuko—nangale kwalokho.
Lendlela elula izokusiza ufunde incwadi ka 2KwabaseKorinte futhi yinhle kakhulu kumuntu oyedwa noma nibaningi.
Masifunde iBhayibheli ndawonye (Ndasa)
Ingxenye yesi-3 kuchungechunge lwezingu-12, loluhlelo luhola imiphakathi ekufundeni iBhayibheli lonke ndawonye ezinsukwini ezingu-365. Mema abanye ukuhlanganyela nawe ngaso sonke isikhathi uqala ingxenye entsha ngenyanga. Loluchunechunge lusebenza kahle ngeBhayibheli eliqoshwe ngomsindo – lalela imizuzu engaphansi kongu-20 ngosuku! ingxenye ngayinye inezahluko zeTestamente eliDala neliSha, kuthi amaHubo achaphake kuzo zonke izingxenye. Ingxenye 3 iqukethe izincwadi ezinguNumeri, iZaga, kwabaseRoma, kanye nakumaHeberu.
Akukhathaliseki ukuthi sihlushwa amanxeba angokomzwelo noma ngokomzimba, intethelelo iyisisekelo sempilo yobuKristu. Ujesu Kristu wabhekana nazo zonke izinhlobo zokuphathwa ngokungafanele nokungalungile, kwaze kwaba seqophelweni lokufa okungafanele. Nokho ngehora
lakhe lokugcina, wathethelela isela eliyinhlekisa elikwesinye isiphambano kanye nababulali bakhe.
Amaplani Ebhayibheli – Februwari 2022
Masifunde iBhayibheli ndawonye (uNhlolanja)
Ingxenye yesi-1 kuchungechunge lwezingu-12, loluhlelo luhola imiphakathi ekufundeni iBhayibheli lonke ndawonye ezinsukwini ezingu-365. Mema abanye ukuze bahlanganyele ngaso sonke isikhathi uma uqala ingxenye entsha ngenyanga. Lochungechunge lusebenza kahle ngeBhayibheli eliqoshwe ngomsindo – lalela imizuzu engaphansi kongu-20 ngosuku! Ingxenye nengxenye inezahluko zeTestamente eliDala neliSha, bese AmaHubo ahlakazeka yonke indawo. Ingxenye yesi-2 iqukethe izincwadi ezinguGenesise, u-Eksodusi, uLevitikusi, kanye kwabaseGalathiya.
Le plani elula izokuholela kwiVangeli NgokukaMark kusukela ekuqaleni kuze kuyabo sekugcineni.
Ungathini uma kuthiwa kunendlela engcono yokulwa nokukhathazeka okungapheli okukugcina ebusuku? Ukuphumula kwangempela kuyatholakala — mhlawumbe kusondele kakhulu kunalokho okucabangayo. Shintsha ukwethuka ukwenze ukuthula ngaloluhlelo lwezinsuku ezingu-7 oluvela eLife.Church, ehambisana nochungechunge lwemiyalezo kaPastor Craig Groeschel ethi Ukungakhathazeki Ngalutho.
Nsuku zonke, kuqubuka impi engabonakali eduze kwakho—engabonwa, engezwakali, kodwa ezwakala kukho konke ukuphila kwakho. Isitha esizinikele, esinodeveli sifuna ukwenza umonakalo kukho konke okubalulekile kuwe: inhliziyo yakho, ingqondo yakho, umshado wakho, izingane zakho, amaphupho akho, isiphetho sakho. Uhlelo lwakhe lwempi luncike ekukubambeni ungazi futhi ungahlomile. Uma ukhathele ukuphushwa futhi ubanjwe ungaqaphile, lolu cwaningo olwakho.
Amaplani Ebhayibheli – Januwari 2022
Kulolu hlelo lweLife.Church Bible Plan, imibhangqwana eyisithupha ibhala ngezifungo zomshado eziyisithupha abangakaze bazisho ngokusemthethweni e-altare. Lezi zifungo zokuzilungiselela, ukubeka phambili, ukulandela, ukubambisana, ubumsulwa, nokuthandaza yizifungo ezenza imishado isebenze kade kudlula umshado. Noma ngabe ushadile noma ucabanga nje ngakho, sekuyisikhathi sokwenza isithembiso.
Masifunde iBhayibheli ndawonye (uMasingana)
Ingxenye yesi-1 kuchungechunge lwezingu-12, loluhlelo luhola imiphakathi ekufundeni iBhayibheli ndawonye ezinsukwini ezingu-365. Mema abanye ukuzohlanganyela nawe uma uqala ingxenye entsha njalo ngenyanga. Loluchungechunge lusebenza kahle neBhayibheli eliqoshwe ngomsindo – lalela imizuzu engaphansi kongu-20 ngosuku! Ingxenye ngayinye inezahluko zeTestamente eliDala neliSha, kuthi amaHubo achaphake kuzo zonke izingxenye. Ingxenye 1 iqukethe izincwadi ezingokukaLuka, iZenzo, uDaniyeli, kanye noGenesise.
izinsuku eziwu 10
Le plani elula izokuholela kwiVangeli NgokukaJohane kusukela ekuqaleni kuze kuyabo sekugcineni.
Oswald Chambers: Injabulo – Amandla Enkosini
Thola ukuhlakanipha kuka-Oswald Chambers, umbhali wencwadi ethi- My Utmost for His Highest, kule ngcebo yolwazi ngenjabulo. Ukufunda ngakunye kufaka izingcaphuno ezivela ku-Chambers kanye nemibuzo ongazindla ngayo. Njengoba ekukhuthaza futhi ekubekela inselelo ngokuhlakanipha kwakhe okulula nokuqondile kweBhayibheli, uzozithola ufuna ukuchitha isikhathi esiningi ukhuluma noNkulunkulu.
Hlanganyela Emibhalweni ungaze uthi awukakaze ngaphambilini. Download the free app futhi uthokozele isikhathi ngokuvamisile ngeBhayibheli, ngesikhathi nalapho ulidinga khona.
Bahasa Indonesia (Isi-Indonesia)
Filipino (Tagalog) (IsiFilipino (IsiTagalog))
简体中文 (IsiShayina (senziwe salula))
繁體中文 (IsiShayina (Esivamile))
Eesti keel (Isi-Estonia)
Português (Portugal) (IsiPhothukezi (sase Phothugali))
తెలుగు (Isi-Telugu )
Tiếng Việt (IsiVietname)
Español (España) (Isi-Spanish (sase Spain))
မြန်မာယူနီကုတ် Myanmar Burmese (Unicode) (Isi-Myanmar Burmese (i-Unicode))
ျမန္မာေဇာ္ဂ်ီာ (Isi-Myanmar Burmese (Zawgyi))
Amaplani Ebhayibheli I-Android i-App yeBhayibheli yezingane i-iOS (i-iPhone iPad) Izindaba Umkhuleko Uncategorized @zu